“Malagasy Roadshow” : hitrandraka mozika harafitra ho horonantsary | NewsMada
“Malagasy Roadshow” : hitrandraka mozika harafitra ho horonantsary
Tetikasa iray, mampivondrona ny fizahantany sy ny kolontsaina ny “Malagasy Roadshow”. Tanjona ny hamokatra sarimihetsika hanasongadinana ny mozika izay hotrandrahina amina faritra maro.
“Manan-karena i Madagasikara, na maro aza no tsy mahafantatra izany. Mbola maro ny azo trandrahina indrindra ny lafiny kolontsaina, ary azo hatao ho fanoitra ho an’ny fizahantany izany”, hoy ny nambaran-dRasoanaivo Anjaramalala. Tompon-kevitra amin’ny tetikasa “Malagasy Roashow” ity mpanatontosa sarimihetsika sady mpanao gazety ity.
Tanjona napetrany rahateo ny hamokatra horonantsary, mampiseho izay harena ara-javakanto izay. Niantso tanora mpanao mozika dimy mirahalahy, samy avy ao amin’ny Jazz Club CGM izy, mba hanao ny trandraka amin’ireo faritra holalovan’ny tetikasa.
Mpanakanto tanora saingy efa nanome porofo ny fifehezany ny mozika ry Njaka Rakotonirainy (vata maroafitsoka), Joro Rakotozafiarison (gitara), Josia Rakotondravohitra (amponga maroanaka) ary Andry Michaël Randriantseva (gitara beso). Hivadika ho tarika ny fiarahana anatin’ny “Malagasy Roadshow”, mandritra ny fitetezam-paritra hotontosain’izy ireo amin’ity taona ity.
Hitrandraka any am-potony
Fantatra kokoa eo amin’ny tontolon’ny jazz ireto mpanakanto ireto. Hitrandraka ny mozika any am-potony, holaroiny ny talentany izy ireo mandritra ny dia rehetra. Hihaona mivantana amin’ireo mpanakanto any am-potony, hianatra, hitrandraka ary hifampizara traikefa izy ireo mandritra izany. Hanomboka any Nosy Be izany ny 8 marsa ho avy izao. “Misy ny toerana tsy mbola falehan’ny mpizahatany, izay hararaotinay hampahafantarana amin’io”, hoy ny fanazavan’ny avy ao amin’ny ofisim-paritry ny fizahantany any Nosy Be.
Hitohy any Sainte-Marie, Taolagnaro ary Morondava ny dia aorian’izay. Nosafidiana manokana ireo toerana ireo amin’ny maha famantanan’ny mpizahatany azy. Horonantsary telo no kasaina hivoaka ankoatra ny rakikira manokana. Kasaina ampahafantarina mandritra ny “Salon International du Tourisme” ny 8 jona ho avy izao izany.